10 Best buustarka ee Android o
Phone Nadiif ah
1 Clear Android / macruufka
1.1 Cad Your Phone
1.3 Clear iPad Taariikhda
1.5 Clear Android Taariikhda
1.6 Clear Android Data
2 Nadiifi Android / macruufka
2.1 Nadiif ah iPod
2.2 Nadiifi iPad
2.3 Nadiifi Mobile Phone
3.1 Hagaajinta iPad Speed
3.2 dardar Your Phone
3.3 Test Android Speed
3.6 Check Speed ​​Mobile Internet
4.1 Nadiifi Master Alternative
4.2 Nadiifinta Android Phone
4.4 iPad Yididiilo Volume Apps
4.5 Downloader Fast Android
4.8 Phone Nadiifi Apps
4.9 Phone Battery Optimizers
4.10 Android Waxuun
4.11 Android Nadiifinta Apps
4.12 daalacashaduna Fast Mobile
10 Best buustarka ee Android
1. Android buusterka FREE
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 4.4
Description: Android suunka waa Software Mobile ayna heerka kowaad ah, taas oo ah aalad awood leh oo ay tiro badan oo ah talooyin loogu talagalay qalab Android aad. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo dedejin qalab aad, batari badbaadiyo, dib u hanato xasuusta, uninstall barnaamijyadooda la rabin oo dila geedi socodka. App ayaa optimizes qaab aad casriga ah ee. Marka laga soo tago qalab kordhiya, waxa ay leedahay qalabka sida Privacy gargaaraha, File Manager, Scanner Virus, Manager App, Manager Network, Manager Battery kaas oo bixiya gaashaan ilaalinta xoog leh oo aad Device Android.
Easy dhan-in-mid app for xasuusta, xawaaraha hagaajinaysa, qaab nolosha batari
Kujira File Manager, Uninstaller, Manager Network, Hawlaha iska fududaysto, Hab-Manager, Call / SMS Blocker, Location Manager Privacy iyo Hawlaha ay u xir
Waxaa ka mid ah Task Killer, Memory buusterka, Battery Saver
Dardar user in ay tayadoodii
Socodka dayi Quick by widget screen guriga anfacaya
Talooyinka waxqabadka fiican
Joogto aad xusuusisaa in ay tayadoodii qalab aad
2. Magaca: Android Kaaliyaha
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 4.5
Description: Tan iyo Android waa il furan, ma aha dhamaystiran oo aan barnaamijyadooda. Kaaliyaha An Android waa app ah in hagaajinaysaa aad waayo-aragnimo Android, wuxuu diyaariyaa xawaaraha orodka iyo hoos u mareenada batteriga. Android Kaaliyaha Coolmuster waa app dhamaystiran oo heer sare ah oo waxtar leh. Coolmuster waa software wax ku ool ah Android maaraynta oo gacan ka SMS, warbaahinta, xiriirada iyo barnaamijyadooda kale madal ay wax looga qabto.
Soo celinta iyo taageero ilaa xogta guud ee Android phone kombiyuutarka shakhsi adigoo gujinaya halka xafidaada oo tayo leh.
Waxaa soo diro iyo fariimaha jawaabay ka PC iyo badbaadiyay SMS Android inay kombiyuutarada.
erfectly riixaya videos, sawir, cod, iyo files ka PC in Android.
Faalladaada, darista, oo la tirtiro xiriirada on PC. Xiriirada nuqul la hagaajin doona by kaaliyaha.
Waxay leedahay hawlaha xadidan
Fariisiyo iyo ciidamada guuleysatey phone mar walba
3. JuiceDefender Battery Saver
System: Android ama macruufka
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 4.8
Description: JuiceDefender si fiican u shaqaynayaan la xiriir, khayraadka isticmaalka Device Android iyo Battery. App wuxuu ka kooban yahay qalab muhiim ah iyo qaababka la fudud oo si sahlan interface. Muuqaaladan muhiim ah: Data Connection Toggling wada, 2G / 3G Toggling, Comprehensive xiriiriyaan Jadwalka, xiriiriyaan Control, Option WiFi Toggle + Auto-Disable, log Waxqabadka iyo Bluetooth xiriiriyaan Control. In si kale loo dhigo, waxa ay yaraynaysaa xaaro iyo dhaawac aad kaniini ama batari Android phone ee ciiyaarta hoos walax aan waxtar lahayn. JuiceDefender waa lacag la'aan la Ultimate iyo casriyaynta Pro loogu talagalay in lagu isticmaala culus.
Waxaa ka furmay screen soo dhoweyn ah dadka isticmaala wargelinta inuu ka tago app ku saabsan oo aad u hesho tahay qiyaasta celcelis ahaan isticmaalka batteriga iyo caadda.
Waxay bixisaa hage user, taageero, Casharrada, war celin, dhib, raad raac iyo soo celinta, iyo in ka badan.
Ka dib markii booting qalab aad, waxaa ku guuldareysto inuu ku soo bilowdo, si aad karta iney u oggolaadaan Start ee booting ilaa doorasho.
Its tab Status u ogolaanaya JuiceDefender iyo banaankiisaba. Waxa kale oo ay badalato Taariikh dhaxaysa goobaha xad gudubku, dheeli tiran, oo ba'an, iyo in la abuuro furan goobaha Advanced, caadadii profiles, log Waxqabadka, iyo Notifications aragtida.
Waxay soo bandhigaysaa macluumaad aad u badan oo weerarka ah in qaabka qoraalka-culus ah.
Yididiilo 4. Volume
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 3.9
Description: Bixinta in aad leedahay hadla weyn iyo headphones in qalab aad, baaritaan this mugga. Iyada oo ku xidhan qalab aad, waxa ay taasi adiga guud ahaan dhawaaqa telefoonka iyo mugga xoog badan 40%. Marka hore, ka jaftaa icon iyo ogolaan app in ay iiraacshay goobaha wanaagsan! App Tani waxay kordhisaa tayada codka sida ciyaaryahan warbaahinta xirfadeed. Waxa kale oo aad ogaan doontaa kala duwan badan ee aad alarm, call cod iyo heerka ringer.
Natiijada dareemi karo in qalab aad: fiican iyo dhawaaqa cad.
App wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u doortaan waxa si kor loogu qaado, music, qaylo, ogaysiisyada, nidaamka heegan, ringer, iyo mugga codka yeedho.
Muuqaaladan UI aasaasiga ah kor loogu qaado button iyo 6 toggles u kordhisay.
App A aad u sahlan oo si sahlan loo isticmaali.
Waxay u baahan tahay ogolaanshaha aad u badan
Waxa aad bombards la xayeysiis aad u badan
5. Internet buusterka
Description: codsiga Tani waxay kordhisaa xawaaraha aad internet gaabis by . 50% waxa ay qabato waa khasnado DNS ah, dardar degsado faylasha aad, files Android, goobaha iyo si fiican video pre-naqdida beddelo. Qaar ka mid ah tusaalayaal kale oo ka mid ah YouTube codsiga, oo waqti gaaban qabowjis. Waxa kale oo ay yaraynaysaa aad DHCP, xusuusta, oo u qoondaysaa video xasuusta cusub ee GPU ah.
Waxa kale oo ka mid ah feature la odhan jiray "The Net Pinger". Its interface waa dareen leh.
Waxaa Sarre internet xawaare xiriir
Baarta oo Cache DNS
Baarta oo khasnado browser
Optimizes Settings Browser iyada oo hawlaha browser tijaabo ah, sida 2D dardar-
Kaliya version Fidmo
6. du Speed ​​buusterka (nadiifiya)
Description: Tani waa sayidkii ah nadiifiye ay ku jirto ka dhisay-in feature ammaanka antivirus BILAASH. Waxaa Sarre xawaaraha aad telefoonka 60%, waxay kordhisaa aad meel lagu kaydiyo la heli karo iyo nadiifin files junk ka nidaamka. Waa dhamaystiran xal ayna phone Android isku dhafan ee ka shaqeynayaan sare ee wanka, iyo sii xoojiyaha xawaaraha, nadiifiye hawsha, kaydinta (khasnado & junk) analyzer, sayidkiinnii ilaalinta iyo ammaanka ilaalin antivirus aad telefoonka.
Qaababka aad u badan oo xiiso leh
Waxaa ka mid ah isku dhafan antivirus engine
Waxay abuurtaa widget ah
Siidaysay boos iyo optimizes khayraadka
Baahiyaha rukhsadda marxalad rakibo
Baado Battery ma daro app this
Buusterka Game waa seegay
Buusterka 7. Network Signal Speed
Description: Waxaa kor u aad waayo-aragnimo dhirta internet. Intaas waxaa sii dheer, xawaaraha internet waxaa lagu go'aamiyaa Bixiyaha Adeegga Internet. User ayaa automatizes optimizations iyo amarrada taas oo ka dhigi biraawsarkaaga mudnaan aad System Android si loo hubiyo in aad hesho wax badan oo ka mid khayraadka qalab iyo xawaaraha internet-ISP waayo-aragnimo ah dhirta siman.
Waxaa ka mid ah "The Net Pinger", kaas oo wax yaabahan oo interface waa dareen leh.
Waxaa ku jira qalab adeeg oo dhigay database diiwaanka.
Uu awood u leeyahay inuu wax ka beddelo nidaamka goobaha.
Tani waa version tijaabo ah.
8. Memory buusterka
Description: Waa dila barnaamijyadooda orodka aan loo baahnayn. Sida Android Kaaliyaha, ku timaadda badhan Yididiilo Quick, taas oo si toos ah u doorta oo Apps in ay dilaan. Xasuusta suunka ay soo jiidashada ah daray dheeraad ah.
Waxaad dooran kartaa in ay dilaan at bareeg ah
Haddii aad rabto oo kaliya in ay dilaan barnaamijyadooda qaar ka mid ah, waxaad sameyn kartaa marinkii xasuusta
Easy in ay isticmaalaan
Waxaad dooran kartaa oo gacanta Apps ama maaraysa aad rabto in laga takhaluso
Waxa uu awood u leeyahay in xaalkaa barnaamijyadooda / geedi socodka xawaaladaha
9. 1Tap Coobbi
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 4.6
Description: Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee kor loogu qaado xawaaraha aad telefoonka ee waa adiga oo wax lagu nadiifiyo ee aruuray aan loo baahnayn, iyo siinaysaa siyaabo fiican si ay u fuliyaan muuqaalada iyada oo ka nadiifsan khasnado. Waa nadiifsan khasnado lacag la'aan ah in safaysaa meel lagu kaydiyo. App waxay u shaqeysaa ayadoo la xorayn, meel lagu kaydiyo iyadoo la fogeynayo files ku meel gaar ah ka tagay codsiyada. Waxaad gacanta ku nadiifin kartaa files khasnado telefoonka ee Chine soo xulay ama cadeeyo dhammaan faylasha ee hal howlgal. App ayaa sidoo kale soo bandhigay tirada guud ee meel lagu kaydiyo oo idiin hadhay, taas oo kuu sahlaysa inaad u falanqeeyaan haddii baahida telefoonka aad nadiifinta ama aan.
Taageerada hab toos ah by nadiifinta files rabin mar la hubo.
Version The free kuu ogolaanaya in aad si aad u nadiifiso maylka aad.
Wanaajinaysaa signal WiFi
Qaar ka mid ah muuqaalada app ee, sida buuxda auto-boost, mawduucyada caadadii, widgets dheeraad ah screen guriga ma loo heli karaa dadka isticmaala lacag la'aan ah.
Kordhinta Xawaaraha 10. SD
Waxaa lagu talinayaa in xiddigood,
Description: Waxay u baahan tahay qalab rujin Android, oo dadajiyaa heerarka kala iibsiga-file iyo hawlaha guud akhrin-qortaa kaarka SD oo ay hagaajinaysa khasnado default size card SD ee ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la furo ee Chine, dhigay galay size khasnado sare iyo ugu dambayntiina, ku dhacay badhanka.
Miyuu doorasho si toos ah dib sida ugu dhaqsaha badan aad u bilowdo qalab aad
Waxaa ka mid ah qaababka badan oo xiiso leh
Saves aad waqti iyo lacag, sababtoo ah waxaa Sarre kaararka SD aad
Waxa aanu shaqeyn ma on dhammaan qalabka Android.
Android carar gaabis ah? Hubi 7 Talooyin in dardar Android Si fudud
Tababare Top 5 Android Kaydinta Apps in Free Up Android Space Si fudud
Top 3 Ogeysiinta Android Manager: demiyo dhibsado Notifications Effortlessly
Top Five Android Photo Qabanqaabiyayaasha
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ka Samsung Devices
Sida loo Download Free Songs ka Google Music
Sida loo rogo ama daanyeer in MP3 u Google Music
> Resource > Android > 10 Best buustarka ee Android